ခ က် ဦး– လိ ပ် ပြာမျို ချိ န် | MoeMaKa Burmese News & Media
ခ က် ဦး– လိ ပ် ပြာမျို ချိ န်
တရွေ့ရွေ့ ပဲ့ကြွေ
တမြေ့မြေ့ သေ အံ့ မူးမူး
ရူး နေလေသော
အချိန် ။ ။
၁၅ . ၉ . ၂၀၁၅